उनको ‘मृत्यु’ सत्य कि अफवाह ? रहस्यमय मुलुक उत्तर कोरियामाथि चीन र अमेरिकाले नजर गाडे « News24 : Premium News Channel
उनको ‘मृत्यु’ सत्य कि अफवाह ? रहस्यमय मुलुक उत्तर कोरियामाथि चीन र अमेरिकाले नजर गाडे
काठमाडौं, १४ वैशाख । उत्तर कोरियाका शक्तिशाली नेता किमजोङ उन मुटु रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भएको खबरको केही दिन पछि उनको मृत्यु भएको अफवाहरु फैलिरहेको छ । उक्त कुरा सत्य हो की होइन भन्दै चीन र अमेरिका सत्य तथ्य पत्ता लगाउन लागि परेका छन् ।
उनको मृत्युको अफवाहहरु सत्य या झुट्टो हो भनि पत्ता लगाउन चीनले आफ्नो एक टोली पठाइसकेको छ । अत्यधिक गोप्य राष्ट्रबाट सत्य पत्ता लगाउन चीनले एक चिकित्सा टोली पठाएकोले अमेरिकाले यस अवस्थालाई नियालेर हेरिरहेको छ।
३६ वर्षीय किमजोङ उन स्वास्थ्य खराबीको कारण २ हप्तादेखि सार्वजनिक स्थलहरुमा देखिएका थिएन। उनको निधन भएको खबर चिनियाँ पत्रकार शिजियान सिन्जौले बताएकी खबर द सनमा उल्लेख छ । ती पत्रकारको सामाजिक मिडियामा १५ मिलियन फलोअर्स रहेका छन् । उनी एक विदेशी मन्त्रीको भतिजी पनि रहेको बताइएको छ ।
जापानी एक मिडिया आउटलेटले मुटुको शल्यक्रियापछि किम वनस्पति स्थितिमा रहेको दाबी गरेको छ । साप्ताहिक पत्रिका शुकन गेंडाईले किमले छाती पछाडि ध्वस्त भएपछि पनि ग्रामीण इलाकाको भ्रमण गरेको उल्लेख छ । उनको दलको सदस्यले उनलाई सीपीआर दिएर अस्पतालमा लगेको जनाइएको छ उन त्यतिखेर गम्भीर बिरामी परेका थिए । त्यसैले उनको धमनीमा स्टन्ट फिट गर्नको लागि ढिलाइ भएको दाबी समेत गरिन थालिएको छ ।
बेइजिङको अर्को एक रिर्पोटले सर्जनहरुको हातहरु थरथर कामेका कारण शल्यक्रियामा गल्ती भएको अनुमान पनि लगाएको छ । किमलाई अन्तिम पटक अप्रिल ११मा सत्तापक्ष मजदूर पार्टीको बैठकमा कोरोना भाइरसको खतराबारे छलफल गरिएको समयमा देखिएको थियो ।
उत्तर कोरियाको एनके डेली एक अनलाइन खबरले किमको मुटुको सर्जरी अप्रिल १२ मा भएको दाबी गरेको छ । उनको निधन भएको केही खबरहरु आइरहेको छ । तर पुष्टि भने भएको छैन उनको मृत्यु भएको हो कि स्वास्थ्य अवस्था मात्र खराब भएको हो भन्ने बारे रहस्यमय मानिएको मुलुक उत्तर कोरियाबाट वास्तविकता आउन सकेको छैन्